Mycotoxins: fampahalalana ho an'ny mycotoxins amin'ny sakafo, sns.-BALLYA
Oktobra 7, 2020
Inona no mahatonga an'i Zearalenone?
Fikarohana haingana Inona no atao hoe Zearalenone? Inona no mahatonga an'i Zearalenone? 1. Zearalenone Effects 2. Zearalenone Toxicity 3. fenitra nasionaly ho an'ny Zearalenone 4. Detection of Zearalenone Ahoana no fomba detox Zearalenone? 1. Fisorohana 2. Famaranana ny detox Inona ny atao hoe Zearalenone? 1. Ny famaritana Zearalenone (ZEN), fantatra ihany koa amin'ny hoe poizina F-2, dia natokana voalohany tamin'ny katsaka ary narary loha. Ny bakteria mpamokatra poizina […]
Inona avy ireo mycotoxins?
Fikarohana haingana Inona avy ireo mycotoxins? 1. Famaritana 2. Famolavolana 3. Toetra mampiavaka 7 Mycotoxins mahazatra miantra amin'ny fitomboana sy ny poizin'ny bobongolo 1. Any an-tsaha 2. Ao amin'ny trano fanatobiana entana Ahoana no hisorohana ny famokarana mycotoxin amin'ny fomba mahomby? Famaranana Inona avy ireo mycotoxins? 1. Ny famaritana Mycotoxins dia manondro ireo metabolita poizina vokarin'ny bobongolo ao […]
Inona no manimba ny bobongolo mainty?
Fikarohana haingana Inona no atao hoe lasitra mainty? Inona no manimba ny bobongolo mainty? Toerana izay mety hisehoan'ny bobongolo mainty sy ny refin-javatra 1. akanjo, rindrina 2. kiraro 3. tabilao fanapahana famaranana Inona no atao hoe lasitra mainty? Koa satria te hahalala ny atao hoe lasitra mainty ianao dia tsy maintsy fantarina aloha ny bobongolo. Ny bobongolo dia karazana […]
Inona avy ireo sakafo misy ochratoxin A?
Fikarohana haingana Inona ny ochratoxin A? Toxisikan'ny ochratoxin A Inona avy ireo sakafo misy ochratoxin a? 1. Vokatry ny zavamaniry 2. Vokatry ny biby fetra amin'ny Ochratoxin A Ahoana ny fitsapana ny ochratoxin a? Ahoana ny fomba hitsaboana ochratoxin a? Famaranana Inona no atao hoe ochratoxin A? 1. Famaritana Ochratoxin dia voaely amin'ny natiora. Ochratoxin dia mamokatra vondrona misy poizina […]
Inona avy ireo sakafo misy aflatoxin?
Fikarohana haingana Inona avy ireo sakafo mety misy aflatoxin? Ahoana ny famonoana aflatoxin? Tsy fifankahazoan-kevitra momba ny aflatoxin Ka inona avy ireo fomba mahomby hanafoanana ny aflatoxin? Inona no azonao atao hanakanana ny aflatoxin? Ahoana ny fitahirizana sakafo mba hialana amin'ny famokarana aflatoxin? Inona avy ireo sakafo mety misy aflatoxin? Aflatoxins dia miely amin'ny natiora sy amin'ny fiainan'ny olombelona. Na dia […]
Aogositra 31, 2020
Inona ny aflatoxin?
Fikarohana haingana Inona ny aflatoxin? Famaritana famaritana fepetra fitsinjarana fananana ara-batana sy simika Manimba ny olombelona ve ny aflatoxin? Fanapoizinana Aflatoxine Toetoetran'ny fanapoizinana Toetra mampiavaka ny kanseran'ny toetra Aflatoxin Inona no atao hoe aflatoxin? 1. Famaritana Aflatoxin (karazana mycotoxin) dia poizina peratra roa furan novokarin'i Aspergillus flavus sy Aspergillus parasalty noho ny antony sasany. Ery […]
Fa maninona no misy aflatoxin M1 amin'ny ronono?
Aflatoxin M1 dia an'ny iray amin'ireo fitambaran'ny aflatoxin mitovy amin'izany ary manana tahan'ny aflatoxin ambony indrindra amin'ny sakafo sy sakafo amin'ny faritra mafana sy mando. Ny fananana ara-batana sy simika ao aminy dia miorina tsara ary tsy simban'ny pasteurisation. Taorian'ny fihinan'ny biby mampinono na sakafo voaloton'ny aflatoxin B1 dia niova izy ireo […]
Novambra 11, 2019
Fakafakao ny fisian'ny aflatoxin amin'ny vovo-dronono
Aflatoxin, amin'ny maha mycotoxin azy, dia metabolite misy holatra vokarina rehefa tsy maina sy voatahiry ara-potoana ny voam-bary na ny sakafo vaovao, ary misy be io. Noho ny fanapoizinana mahery vaika sy ny fahasamihafana eo amin'ny vatany, dia voafaritry ny fenitry ny sakafo nasionaly sy ny fenitra ara-tsakafo ny lalàna mifehy azy. Aflatoxin M1 dia an'ny mycotoxin ary hydroxylation […]
Manimba ny olombelona ve ny aflatoxine?
Vao tsy ela akory izay, ny State Administration of Food and Drug Administration (SFDA) dia nitatitra ny fanaraha-maso sy ny santionany ny vovon-dronono an-tsokosoko zaza tamin'ny taona 2014. Ny santionany 48 tamin'ny santionan'ny orinasa mpamokatra ronono maro an'ny tsenan-dronono dia tsy mendrika. Ity no fanambarana lehibe voalohany momba ny valin'ny fizahana santionany taorian'ny "fanadinana lehibe" fanovana […]
Maninona ny aflatoxin no mihoatra ny fenitra vovo-dronono matetika mitranga
Ny vokatra vita amin'ny ronono dia nampiharihary ireo loza mety hitranga tsy misy farany, ny andiam-boono misy olana eo amin'ny talantalana, ny sampan-draharaha misahana ny indostria sy ny varotra dia nilaza ihany koa fa tokony hanasazy mafy ilay orinasa manana olana ara-kalitao, mety ve izany aorian'ny sazy? Inona ny aflatoxin? Avy aiza ny aflatoxin, izay manana olana ny rohy famokarana, ahoana no ahazoana antoka […]
Ahoana no hisorohana ny aflatoxins?
Vao tsy ela akory izay, ny Sampandraharaha misahana ny sakafo sy ny zava-mahadomelina ao China dia namoaka boribory momba ny fizahana santionany ny vovo-dronono ronono zazakely tamin'ny taona 2014. Raha ny angom-baovao dia 48 ny andiam-santionany XNUMX no tsy mendrika. Ny fiarovana ny vovo-dronono dia natosika ho any amin'ny toerana mialoha. Mikasika izany, misy ny manam-pahaizana momba ny ronono dia nidera ny firenena henjana sy mangarahara […]
Inona no mahatonga ny aflatoxine amin'ny vovo-dronono?
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, lozam-pifamoivoizana amin'ny fiarovana ny vovo-dronono amin'ny tsenan-dronono dia matetika. Ny tranga melamine vovoka melamine an'ny Sanlu Group dia nanaitra an'i Shina tamin'ny taona 2008. Avy amin'izany dia nianatra namantatra ny tenany tamin'io teny simika tsy dia tsara io ny Sinoa ary natahotra ny hiresaka momba izany izy ireo. Fotoana fohy taorian'ny lozam-pifamoivoizana dia voasariky indray izahay sinoa […]